एमालेमा ‘ओथेलो सिन्ड्रोम’ अर्थात इश्र्या रोग - Ratopati
- | कुसुम भट्टराई
विलियम सेक्सपियरको नाटक ‘ओथेलो’मा एक यस्ता पात्र छन् जो आफ्नी श्रीमती परपुरुषसँग लागेको शंकामा इश्र्याको अग्नीमा जल्छन् । उनकी श्रीमती निर्दोष हुँदाहुँदै पनि शंकाले लंका जलाउँछ । इश्र्या रोग कुन हदसम्म बढ्छ भने त्यो पात्रले आफ्नी श्रीमतीकै हत्या गरिदिन्छ । यहीँ कथावस्तुमा आधारीत रहेर हिन्दी चलचित्र ‘ओमकारा’को पनि निर्माण गरिएको छ । यसखालको इश्र्याको समस्यालाई मेडिकल साइन्समा ‘ओथेलो सिन्ड्रोम’ भन्ने गरिएको छ ।
इश्र्या एक मानविय संबेदना हो, उर्जा हो । इश्र्या भावलाई सकारात्मक दिशा दिन सकियो भने मानिसले धेरै पुरुषार्थ गर्नसक्छ । उसले इश्र्याको उर्जालाई सफलताको सिंढी बनाउनसक्छ, यदि त्यो नकारात्मक कोणतीर गयो भने त्यसले विध्वंश मच्चाउँछ ।
हिजोआज एमाले वृत्तलाई पनि ‘ओथेलो सिन्ड्रम’ अर्थात शंका र इश्र्याले गाँजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार गठन हुनासाथ एमालेलाई इश्र्या रोगले यसरी गाँज्दै लगेको छ कि, उ दिनप्रतिदिन ध्वंशात्मक बन्दै गएको छ ।
एमालेमा ओथेलो सिन्ड्रोमा लक्षणहरु त्यसबेला देखा पर्न थाले, जब पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने पहल थाल्यो । पुर्ववर्ती केपी ओली सरकारको ‘भारत विरोधी खोक्रो राष्ट्रवाद’का कारण नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका थिए । चीनतिर मात्र एकतर्फी रुपमा बढी ढल्कीएर ओलीले नेपालको असंलग्न र पंचशीलमा आधारित परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाएका थिए । तीनतीर खुला सीमा जोडिएको भारतसँग आवेगमा आएर पैंठे जोरी खोज्नु मुर्खता थियो । त्यस्तोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हाम्रा दुबै छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाइदियो ।
ओली सरकारका पालमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भारत भ्रमण नियतबस रद्द गराइएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन हुनासाथ आपसी तिक्तता र कटुता मेटदै अनि दु्ई देशवीचको सम्बन्धमा नयाँ मिठास घोल्दै भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट नेपालको भ्रमण भयो । अहिले नेपाल र भारतवीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको छ । भारत विरोधी राष्ट्रवादको आगोमा स्वार्थको रोटी सेक्नेहरु हतोत्साहीत भएका छन् । नेपालमा जारी संविधान कार्यान्वयन प्रकृयालाई भारतको सद्भाव र समर्थन रहेको छ । हालै मगर, मधेशी र थारु समुदायलाई समेत समेटने ढंगले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावलाई भारतले स्वागत गरेको छ । यसरी प्रचण्ड सरकारका पालामा कुटनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलन आएको देखेपछि एमाले चित्तमा ‘इश्र्या भाव’ बढ्दै गएको छ ।
पोहोर साल हिउँदमा ओलीकै सरकार थियो, तर जनता दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री हुनासाथ प्रचण्डले भने, ‘अबदेखि उपत्यकामा लोडसेडीङ हुँदैन, विस्तारै पुरै देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराउँछौं ।’ नभन्दै यसपालीको हिउँदमा काठमाडौं र आसपासका जिल्ला झलमल्ल छन् । राजधानीबाहिरका जिल्लामा पनि पिक आवरमा मात्र बढीमा दुई घन्टा लाइन काटने गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रशारणमा नयाँ आयोजनाबाट बिद्युत थप नभइकन पनि कसरी लोडसेडिङ हट्यो त ? भन्ने आश्चर्यजनक प्रश्न आम नेपालीमा उत्पन्न भयो । अनि बिद्युत प्राधिकरणका इमानदार अगुवा कुलमान घिसिङले भने, ‘यो व्यवस्थापकीय कुशलता र जनताप्रतिको इमानदारीताको प्रतिफल हो ।’
हुन पनि अघिल्ला शाषकले विभिन्न उद्यमी र व्यापारिक घरानाबाट मोटो रकम कमिीसन खाएर बिजुली जती उनैलाई पठाउँदै आएका थिए । बितरणमा भेदभाव थियो । कुलमानले बिजुलीको समान बितरणमा कुशलता देखाएर लोडसेडिङ हटाएनन् मात्र, पहिलेका सरकारका काला कर्तुतको पोल पनि खोलीदिए । अहिले लोडसेडिङमुक्त गराएकोमा काठमाडौंका जनता खुशी छन् । जनताले प्रचण्ड सरकारको हाईहाई गरिरहेका छन् । कुलमान घिसिङको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । माओवादी सरकार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कुलमानको प्रशँसा र लोकप्रियता जति जति बढ्दैछ, एमालेलाई ‘ओथेलो सिन्ड्रोम’ले उती उती गाँज्दैछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान यतिबेला कसरी जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने भन्नेमै केन्द्रीत भएको उनको व्यस्त दैनिकीबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । सिंगो नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन हाल निर्माणाधिन परियोजना जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गराउनु जरुरी छ । सोही कारण प्रचण्डले चमेलीया परियोजनाको स्थलगत निरिक्षण गरे । उनले निरिक्षण गर्नासाथ काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । त्यसैगरी उनले राष्ट्रिय प्रशारण केन्द्र र कुलेखानी आदिको स्थलगत अध्ययन गरेर सबैलाई हौसला दिए । दिनको तीन सिफ्ट काम गरेर भए पनि प्रतिफल चाँडो ल्याउन उनले निर्देशन दिए । प्रचण्डले मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण गरेपछि त्यहाँ कामको रफ्तार बढेको खबर आइरहेको छ । यसैगरी हिल्सा पुलको द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गराएर उनले तिब्बतको मानसरोबरसम्मको रुटलाई सहज बनाउन पहल गरे र आफै त्यो पुलको उद्घाटनमा सरिक भए । नेपालको दुरगामी विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण परियोजनालाई सकेसम्म चाँडै सम्पन्न गराउने प्रचण्डको तदारुकता र दौडाहा देखेर एमालेलाई ‘औडाहा’ भइरहेको छ ।
संसदमा प्रस्तुत सँविधान संशोधन प्रस्तावका कारण यतिबेला मधेशका जनता खुशी छन् । मगर, थारु र जनजाती पनि खुशी छन् । भारतले पनि समर्थन जनाएको छ । सत्तारुढ दल काँग्रेस पनि खुशी छ । तर, ‘पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउनु राष्ट्रघात’ भन्दै केही दिन एमाले बु्रुक्क उफ्रियो । त्यो पनि इश्र्या रोगकै उपज थियो । ‘माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारका पालामा संविधान संशोेधन पास भएमा र म्ुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेमा त्यसको श्रेय पनि अहिलेकै सत्तारुढ दलहरुले पाउने भए, संविधान कार्यान्वयनपछि हुने निर्वाचन पनि यीनै दुई दलले गराउने भए, एमालेको त कुनै खैरियत नहुने भयो’ भन्ने शंका र इश्र्या एमालेमा उत्पन्न भइरहेको छ ।
हिजो केपी ओलीले नै हस्ताक्षर गरेर सहमती जनाएकै खाका बमोजिम बर्तमान सरकारले ल्याएको संघीय सीमांकन हेरफेरको बिरोधमा एमाले उत्रिएको छ । तर, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई मधेशको प्रदेशबाट अलग गराउने प्रस्तावको मुल जननी केपी ओली नै हुन् भन्ने प्रमाण सार्वजनिक भएपछि भने एमालेको यो फण्डा पनि शान्त हुँदै गएको छ र राष्ट्रियताको उसको कोकोहोलो फोस्रो साबित भएको छ । अहिले मधेशी जनता एमालेलाई सरापीरहेका छन् । मधेशमा एमालेको हालत पतला हुँदै गएको छ । सायद यही कारण एमालेको ‘ओथेलो सिन्ड्रोम’ ध्वंशात्मक, निहु खोज्ने र मुठभेड रोज्ने दिशातर्फ अग्रसर हुँदैछ ।
पुरानै सँरचना बमोजिम स्थानिय निर्वाचन गर्न सत्तारुढ दलहरुसँग सहमती जनाइसकेपछि भोलीपल्टै एमालेले ‘स्थानिय हैन, केन्द्रीय चुनाव गरौं’ भनेर भन्नु पनि अस्थीर मनस्थितिकै लक्षणहरु हुन् । ओथेलो सिन्ड्रममा पनि यस्तै लक्षणहरु देखापर्छन् । मानिसको सोच, विचार र निर्णय अस्थीर हुन्छ । मानिसले निहुँ खोज्छ । एमाले पनि अहिले समस्या समाधानतीरभन्दा बल्झाउनतीर बढी अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । कहिले के भन्छ, कहिले के भन्छ ।
मस्तिष्कमा आवश्यक केही रसायनहरुको कमी भएमा ‘ओथेलो सिन्ड्रोम’ हुने गर्छ । चिकित्सकले विभिन्न औषधिहरुको माध्यमबाट मानिसको मश्तीष्कमा त्यो रसायन पु¥याइ ओथेलो सिन्ड्रम लागेका व्यक्तिलाई निको बनाउँछन् । तर, एमालेको उपचार कसरी गर्ने ? यो जटिल प्रश्न हो ।
सत्तारुढ दल निकट एक चिकित्सक भन्छन्, ‘एमालेलाई सत्ताको इन्जेक्सन चाहिएको छ । एमालेको मस्तिष्कमा सत्तारुपी रसायनको कमी भएकाले ओथेलो सिन्ड्रमका लक्षणहरु देखिएका हुन् । चुनावमा जान पनि उसलाई सरकारमा जानै परेको छ । त्यसैले एमालेले खोजेको उपचार भनेको सत्ता नै हो ।’
सत्ताको इन्जेक्सन लगाएर एमालेको उपचार कसले, कसरी र कहिले गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । जनता चाहन्छन्, उसले धेरै विध्वंश मच्चाउनुअगावै एमालेको उपचार हुनु जरुरी छ ।’